दशैँ पर्व आयो, मास्क लगाएर पर्व मनाउनु नै ज्यान जोगाउने उपाय हो ! || विचार
दशैँ पर्व आयो, मास्क लगाएर पर्व मनाउनु न...
दशैँ पर्व आयो, मास्क लगाएर पर्व मनाउनु नै ज्यान जोगाउने उपाय हो !
कोरोना संक्रमणबाट मर्नेहरुको घटेको छ । संक्रमितहरु पनि कम हुँदै गइरहेका छन् । दशैँ तिहार जस्ता महत्वपूर्ण पर्वहरु नजिक आइपुगेका छन् । दशैँ पर्व मनाउने क्रममा निश्चय पनि भिडभाड हुने नै छ । जतिसुकै कम गर्न प्रयास गरे पनि पर्वहरुमा भिड कम गर्न सकिदैन । तर कोरोनाले आफ्नो विस्तार पैmलाउन सक्छ भन्ने सवालमा सचेतता अपनाइएन भने दशैँ पर्व नै काल बनेर आउनेछ ।
रोजगारीका निम्ति छिमेकी देश भारत पुगेका नेपालीहरु खुल्ला सीमानाबाट प्रवेश गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । सिमा नाकाहरुमा आवागमनको घुइँचो लागिरहेको छ । भारतमा कोरनो संक्रमणको दर घट्ने र बढ्ने क्रम जारी छ । भारतबाट नेपालतर्पm आउनेहरुमा कोरोना संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ । पीसिआर परिक्षणको आवश्यकतातर्पm सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैले देशका विभिन्न विकट जिल्लाहरुमा पनि कोरोना संक्रमण दशैँ पर्वका क्रममा विस्तार हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सर्वोतम् उपाय बनेको छ सुरक्षित तवरले माक्स लगाउने । तसर्थ कुनै सार्वजनिक स्थल, स्कूल, क्याम्पस लगायतका भीडभाड हुने स्थानमा जादा मास्क लगाएमा मात्रै पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्न सक्ने उपाय हुनेछ । यो नै सर्वोत्तम उपाय हो । अहिले विश्वभरका मानव समुदायको एउटै चिन्ताको विषय बनेको छ, कोरोना भाइरसबाट कहिलेदेखि उन्मुक्ति पाउन सकिएला । कतै कोरोना कै कारण मानव सभ्यताकै अन्त्य हुने त होइन भन्ने त्रास पनि व्यापक पाइन्छ ।
कोरोना भाइरसका विकसित रुपहरु अभैm देखा पर्ने क्रम रोकिएको छैन । त्यसैले यसको संक्रमणको सम्भावनालाई चुनौतिका रुपमा स्वीकार गर्दै सावधानी अपनाउनु नै श्रेयस्कर हुनेछ । विभिन्न अध्ययनबाट पनि कोरोना भाइरसका नयाँ भेरियन्ट जस्तै अल्फा र डेल्टा फेला परिरहेका छन् । सुरुको भाइरसभन्दा धेरै संक्रामक भएका कारण अल्फा र डेल्टा पहिलेको तुलनामा धेरै हानिकारक सावित भइसकेको छन् । गत वर्ष पनि दशैँको समय कोरोना भाइरस शिथिल भएको थियो । दशैँ पछि लगत्तै प्रकोप बढेको पनि हो ।
अल्फा र डेल्टाले मानिसहरुलाई संक्रमित बनाइरहेको एक अध्ययनले पत्ता लगाइसकेको छ । जसअनुसार भाइरस सुरुको चरणबाट परिवर्तन हुँदै हावाको माध्यमबाट सजिलै सर्ने अवस्थामा पुगेको पत्ता लगाइएको छ । गत वर्ष नै कोरोना भाइरस हावाको माध्यमबाट सर्ने देखिएपछि महामारी रोकथामका लागि सोही अनुरुपको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुरु गरिएको हो । तसर्थ बन्द स्थानमा बस्दा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, सामाजिक दूरी र भेन्टिलेसनको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषयमा पनि बहस चलेको थियो ।
अहिलेसम्म प्रायः सबै अनुसन्धानकर्ताहरु कोरोनाभाइरस संक्रमित व्यक्तिको नाक–मुखबाट निस्किएर भुइँमा झरी हाल्ने ठूला थोपाका साथै हावामा पैmलिएर लामो दूरीसम्म पुग्न सक्ने मसिना थोपा (एयरसोल) का माध्यमबाट सर्छ भन्नेमा एकमत पाइन्छ । एयरसोल अत्यन्तै सूक्ष्म हुने भएका कारण यो सिधंै फोक्सोमा पुग्न सक्ने हुँदा झनै बढी जोखिम हुने जनाइएको छ । नयाँ अध्ययनहरुबाट यो तथ्यको बुझाइमा कुनै परिवर्तन आएको देखिदैन । तर, केही अवस्थामा सुरक्षित रुपमा मास्क लगाउनुको विकल्प नभएको र भाइरस अझ बढी शक्तिशाली भइरहेकोतर्फ सचेत बन्नै पर्छ ।
अमेरिकाको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एलर्जी एण्ड इन्फेक्सियस डिजिजेजमा कार्यरत भाइरोलोजिस्ट तथा अध्येता डा. भिन्सेन्ट मुन्सटरका अनुसार सूक्ष्म एयरसोलले ठूलो थोपाभन्दा धेरै लामो दुरी तय गर्छ र एल्फा भेरियन्ट फैलिनुको मुख्य कारण पनि त्यही थियो । ’यो भनेको भाइरसमा परिमार्जन भइरहेको छ जसका कारण यो थप सहज रुपमा एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सरिरहेको छ,’ उनले भनेका छन् ।
यस्तै दोस्रो अध्ययनका अनुसार भने एल्फा भेरियन्टबाट संक्रमितले पहिलाको भेरियन्टबाट संक्रमित व्यक्तिभन्दा ४३ गुणा बढी भाइरसयुक्त एयरसोल श्वाासप्रश्वासका क्रममा निकाल्छन् । उक्त अध्ययनले एल्फा भेरियन्टलाई ओरिजिनल वा अरु पुराना भेरियन्टसँग तुलना गरेको थियो । तर, यो अध्ययनको नतिजाले अन्य भेरियन्टभन्दा डेल्टा भेरियन्ट किन बढी संक्रामक भयो ? र अन्य भेरियन्टलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्यो भन्ने बारे पनि विश्लेषण गर्न सक्षम भएको छ ।
अध्ययनले भाइरस साँच्चै नै हावाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्षम भइरहेको देखाउँछ,’ भर्जिनिया टेककी हावाबाट सर्ने भाइरसकी विज्ञ लिनसे मारले भनिन्, ’त्यसैले डेल्टा भेरियन्ट एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने सम्भावना अझ बढी हुन्छ भन्नेमा मलाई कुनै आश्चर्य लाग्दैन ।’ विज्ञहरुका अनुसार एल्फाभन्दा डेल्टा भेरियन्टमा भएको अनुवांशिक परिवर्तनका कारण थप संक्रामक देखिएको छ । होसियार बनौं, संक्रमणबाट बचौं ! सबैलाई दशैँ पर्वको शुभकामना ! -जनधारणा साप्ताहिकबाट